…..र फुलेनन् गुराँसहरू | मेरो खेस्रा whatever i feel
सन्तोष दाइ पहिलोपटक खलनायकको रुपमा प्रस्तुत हुने भएका थिए । एउटी नायिकाको मात्र खाँचो परिरहेको थियो । चलचल्तीमा भैरहेका कुनै पनि नायिकाहरुभन्दा त्यतिबेलाको म कान्छो देखिन्छु भन्ने अरुण दाइको भनाइ थियो । त्यसैले बरु कुनै नयाँ अनुहार खोज्ने भन्ने हाम्रो सल्लाह भैरहेको थियो ।
“हामीलाई ऊः त्यस्तै नायिका हो चाहिएको ।” परबाट आइरहेकी ती युवतीलाई हेर्दै अरुण दाइले भने ।
नभन्दै अन्दाजी अठार उन्नाइस वर्षकी ती युवतीमा केही अचम्मको आकर्षण थियो । उनी आफ्नै सुरमा साथीसंग गफ गर्दै आइरहेकी थिइन् ।
“रोल अनुसार पनि ठ्याक्कै फिट हुन्छे,” सन्तोष दाइले खुइय गर्दै भने ।
“तर बाटोमा हिंडिरहेकी केटीलाई फिल्म खेल्ने रहर छ कि भनेर सोध्न भएन क्यार” मैले भनें ।
“किन नहुनु र ?” शैलेश दाइ उत्साहित भए, “सोध्न नहुने कुरा के छ ?”
तर बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने ? उनीहरु हाम्रो नजीक आइपुगिसकेको थिए ।
“एक्स्क्यूज मी बहिनी, एउटा कुरा सोधौं ?” शैलेश दाइले नभन्दै उसलाई सम्बोधन गरिहाले । उनी टक्क रोकिइन् र प्रश्नवाचक भावले हामीलाई हेरेर बोलिन्,
“हजूर, भन्नुस् ।”
शैलेशदाईले आफूहरुले एउटा सिनेमा बनाउन लागेको र उसलाई हेर्दा हामीले नायिकाको लागि खोजिरहेको मानिस ऊ हुनसक्ने कुरा बताएर उसको रुचि छ कि छैन भनेर सोधे । उनले राम्ररी सोच्दा पनि नसोची अँग्रेजीमा भनिन्,
“यस्, आइ एम इण्ट्रेस्टेड ।”
उनमा गज्जबको आत्मविश्वास थियो । हामी सबै दंग प¥यौं । एकै छिनको छोटो कुराकानीमा थाहा भयो, उनी नाचघर निर भएको एउटा ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्दी रहिछन् । शैलेश दाइले नै ग्रूप थ्रीको नाम बताएर अर्को दिन एघार बजे आउनलाई भने । उनी हुन्छ भनेर गइन् । हामी पनि संयोगवश भनेको जस्तै मान्छे पाएकोमा दंग पर्दै आफ्नो बाटो लाग्यौं । ग्रूप थ्रीमा एकजना भारतीय हिजाइनर र फोटोग्राफर थिए, बिजय फरकसे । उनले भने,
“एक पटक फोटो शूट गरौं । दुईजना साथै कस्तो देखिन्छन्, आइडिया हुन्छ ।”
म मनमनै हाँसेको पनि थिएँ । बाटोमा त्यसरी भेटेर भनेको भरमा भोलि कोही सिनेमा खेल्नको लागि आउला र ? यहाँ भने फोटो सेसनको समेत तयारी भै सक्यो ।
भोलिपल्ट नभन्दै एघार बजे उनी टुप्लुक्क आइपुगिन् । केही बेर यता र उतिका कुराहरु भए । हामीले उनलाई कति बेर फुर्सद छ भनेर सोध्यौं । निर्धक्कसंग उनले भनिन्,
“मलाई केही हतार छैन ।”
“अफीस विदा लिएर आएको ?”
“हैन, छोडेर आएको ।” उनले भनिन् ।
हामी चकित प¥यौं । हाम्रो अनुहारको भाव पढेर होला,उनले मुसुक्क हाँसेर भनिन्, “अब फिल्मको हिरोइन हुने भैसकेपछि म किन त्यो ट्राभल एजेन्सीमा काम गरिरहनू ?”
हाँस्दा उनको एकापट्टि गालामा सानो खाल्डो पथ्र्यो र उनी अझै सुन्दर देखिइन् । उनको आत्मविश्वासले हामीलाई कायल बनायो । त्यसै दिन बिजय फरकसेले थरिथरि पोजमा हामी दुइ जनाको फोटाहरु खिचे । अहिलेजस्तो तुरुन्तै हेर्न नमिल्ने हुनाले फोटाहरु कस्ता आए वा हामी दुबै क्यामरामा कस्तो देखिन्छौं भनेर हेर्नको लागि रिल धुलाएर नआउन्जेल सम्भव थिएन । न्यूरोडस्थित कुनै कलर ल्याबमा रिल पठाइयो । अरुण दाइले उनलाई भूमिकाको बारेमा बताए । हामी सबैलाई भित्रभित्रै विश्वास भैसकेको थियो, “…र फुल्छन् गुराँसहरु” की नायिका उनै हुन् ।
फोटाहरु आए, सबैले उनलाई एक मतले पास गरे । बाँकी एउटै समस्या पनि सुल्झिसकेको हुनाले सिनेमाको लगभग छायाँकन शुरु गर्ने मिति पनि तोकियो । रमण दाइले (घिमिरे) केही गीतहरु लेखिसकेका थिए । भूपेन्द्र रायमाझी तिनमा धुनहरु सिर्जना गर्न थालिसकेको थिए । मैले पनि नबिल छाडें । बसन्त श्रेष्ठको पुतलीसडक स्थित प्रशिक्षण केन्द्रमा म बिहानबिहान नृत्य सिक्न जान थालें । हामी सबै उत्साहित थियौं । हरेक दिन भने जस्तो अरुण दाइको घरमा भेला भएर हामी सिनेमाका अरु कुराहरुमा छलफल गर्ने गथ्र्यौ । सिनेमा शुरु हुने दिन पनि झनै नजीक–नजीक आइसकेको थियो ।
अचानक, मान्छे ताक्छ मूढो बञ्चरो ताक्छ घुँडो भनेझैं हुन थाल्यो । सन्तोष दाइको छवि टेलिभिजनमा सकारात्मक पात्रको थियो । पहिलो पटक नकारात्मक भूमिका गर्न लागेको हुनाले शायद उनको मनमा केही संशयहरु पैदा हुन थालेका थिए । उनी एक उत्कृष्ट अभिनेता हुन् भन्ने कुरामा त कसैलो रत्तिभर पनि शंका गर्ने ठाउँ छैन । सम्भवतः त्यसैले उनलाई आफ्नो त्यो भूमिका त्यति सशक्त हुँदैन कि भन्ने लाग्न थालेको थियो ।
हुन पनि टेलिभिजनमा उनले बनाएका फिलम्हरुमा सबै कथा उनले खेल्ने चरित्रकै वरिपरि घुम्थ्यो, अरुहरु त सहायक पात्रहरु मात्र हुन्थे । सन्तोष पन्तको सिनेमामा उनको बाहेक अरुको चर्चा हुँदैनथ्यो । केही समय अघि हाम्रो त्यही टिमले बनाएको “आफ्नो कमाइ” नामक टेलिफिल्मले पनि उनलाई सचेत बनाएको हुनुपर्छ । किनभने त्यसमा पहिलो पटक सन्तोष पन्तको सिनेमाबाट उनले भन्दा बढी चर्चा अरु कलाकारले कमाएको थियो । “..र फुल्छन् गुराँसहरु” त झनै व्यावसायिक चलचित्र हुने हुँदा त्यसको कथा त नायक र नायिकाकै वरिपरि घुम्नु स्वाभाविकै थियो । त्यसैले सन्तोष दाइ भित्रको कलाकारलाई संशयले झनै छोप्न थालेको थियो । त्यसैले उनी आफ्नो भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने आइडियाहरु ल्याउन थालेका थिए ।
त्यसबेला हाम्रो टीममा सबैभन्दा जल्दोबल्दो नाम र सिनियर कलाकार उनी नै भएका कारण अरुण दाइ र हामी सकेसम्म उनका कुराहरुलाई समाहित गर्न खौज्थ्यौं । तर हुँदाहुँदा कतिसम्म भयो भने, पछि त ती सबै कुरा समाहित गर्दा सिनेमा पूरै उनकै चरित्र वरिपरि मात्र घुम्ने भयो । यो कुरामा हाम्रो बीचमा मतभेद हुन थाल्यो । एकातिर सन्तोष दाइ, अर्को तिर हामी तीनजना । कुरो मिल्ने भन्दा पनि बढी बल्झिन थालेको थियो ।
त्यस दिन पनि स्क्रिप्ट अगाडि राखेर हामीहरु यही कुरामा वहस गर्दै थियौं । दुबै पक्षले अर्को पक्षलाई आश्वस्त पार्न नसक्ने अवस्था आइसेकेको थियो । अनि दुबै पक्ष आआफ्नो अडानबाट पछि हट्न नचाहने अवस्था पनि सिर्जना भइसकेको थियो । मलाई वैराग लाग्न थालिसकेको थियो । आवेगमा आएर मैले भनें,
“अब यो तालले कुरो मिल्दैन हेर्नुस्, विवाद गरेर केही फाइदा छैन । यो सिनेमा बन्दैन अब ।”
अल्लारे उमेरको मेरो अधकल्चो दिमागको एउटा फ्यूज उडेको थियो शायद । अनि मैले एउटा एकदमै अपरिपक्व र मूर्खतापूणै कार्य गरें । हातैले लेखिएको जुन स्क्रिप्ट थियो, त्यसलाई टिपेर म जुरुक्क उठें । कसैले केही सोच्नु अघि म त्यसलाई धूजाधूजा पारेर च्यात्न थालें ।
मेरो त्यो अप्रत्याशित कार्यले एकैछिन सबैजना हतप्रभ भए । सबै अवाक भएका थिए । विवाद शान्त भैसकेको थियो र कागज च्यातिएको एकोहोरो र वैरागलाग्दो ध्यार्र–ध्यार्र आवाज मात्रै आइरहेको थियो । महीनौं लगाएर गरेको त्यो आफ्नै सिर्जनालाई नाश गर्न मलाई एक मिनेट पनि लागेन । कोही केही बोल्नै सकिरहेको थिएन । म पनि कसैसंग केही नबोली त्यहाँबाट हिंडे । कुनै पनि कुरा सिर्जनागर्न पो गाह्रो हुन्छ त, नाश त एकैछिनमा भै हाल्छ नि । अनि नाश भैसकेपछि हाम्रो हातमा केही बाँकी रहँदैन ।
केही दिनसम्म हाम्रो भेटघाट पनि भएन । पछि अरुण दाइले त्यो स्क्रिप्ट फेरि लेखेर फिल्म बनाउन पहल नगरेका त हैनन्, तर शायद त्यो जाँगर ममा पनि बाँकी रहेको थिएन । तोकिएको समयमा छायाँकन शुरु गर्न त अब यसै पनि सम्भव थिएन । कालान्तरमा त्यही कथालाई आधाआधा यता र उता मिसाएर अरु दुइटा सिनेमा बने । एउटा थियो, “चोट”, अर्को “सोल्टिनी ।”
“र फुल्छन् गुराँसहरु” मा नायिका बन्न जागीरै छोडिदिने ती युवतीको नाम थियो। रजनी । उनलाई सिनेमाको लागि भनेर शैलेस दाइले सुष्मिता भनेर न्वारान् गरिदिएका थिए । हामीले उर्वशीको लागि नै एउटा फोटो नोभेलामा नायक नायिका बनेर चित्त बुझायौं । कुनै एउटा चियाको मोडलिंग गर्ने क्रममा उनको भुवन केसीसंग भएको भेट यनीहरुको दाम्पत्य जीवनमा परिणत भयो । पछि गएर सुष्मिता “करोडपति” “नेपाली बाबू” र “तँ त साह्रै नै बिग्रिस् नि बद्री” जस्ता सफल चलचित्रहरुका नायिका बनिन् ।
तर गुराँस चाहिँ फक्रनै पाएन ।
“….र फुलेनन् गुराँसहरु ।”
« कुपन नम्बर ४००
सानो मिटिंग »
2 thoughts on “…..र फुलेनन् गुराँसहरू”
I feel great reading your articles. Hope to read more frequently. I have noticed that your last blog was on October 2015, almost more that 1 year back.
Thanks. I moved my blog toanew place. U can check